Fuula jalqabaa irratti Masaka Toottoo Taattoo baafata dubbii hallee keessatti akaakuu taattoo filachuu dandeessa.
Durargii taattoo qindaa'ina isa haraa qaaqaa kessatti galchitee gabaasa.
Yoo qaaqa TOLE jette kessaa baate qindaa'inni yeroo hundaaf fayyada.
Yoo qaaqa dhiistee yookan irra utaalte kessaa baate, taattoon haalatti deebi'a yoo ati qaaqa bantu.
Taattoo 3D dhaaf Dhangii - Ilaaloo 3D filachuun kaadhima, argamsaa fi calaqqee qindeessuu dandeessa.
Gatii marsaa taattootiif siiqqoo sadee irratti fi tilmaama mil'annoo galchi.
Kofa hunda 0 tti taattoo mul'anno fuldurattif qindeessi.Taattoo deloo fi taattoo donuutii akka geengootti agarsiifamu.
Siiqqota gara mirgaa waliin hojjeta, qabiyyee taattoo kallattii X fi Y kessatti marsuu dandeessa, innis daangaa taattootiin walmaddii dha.
Gatiin x inni 90 y fi z waliin 0 tti qindaa'uun, mul'ata gubba gara jala taattootti agarsiisa. Gara jala taattoo x waliin -90 qindaa'e argita.
Marsaan tartiiba dura x, itti aanee y, dhuma irratti z fayyadama.
Yoo gadideessuun hojate fi taattoo marsite fi yoo ifni taattootti murataa'e ifni ni marsama.
Siiqqonni marsaa yeroo hunda fuula walitti foraa'a, taattoo siiqqotaati miti.
Tilmaama haalhojii tattoo filadhu tilmaama keessaa akka doo'atuuf fakkaftuu mul'istu fayyadami iddoo karoortii walmaddii fayyadamuun.
Dheerina xiyyeffanna qabduu qaanxii waliin qindeessi. 100% tilmaama mul'ataa kenna yommuu afoon fagoo guddinni taattoo tilmaaman walakka afoo cinaa fakkaatu.
Fooyyeen durattii LibreOffice kan agarsiisa paarsantii tilmaamaa foyyee ammee waliin tokko ta'e.
Gurmoo sanduuqa tarree irraa filadhu.
Gurmoo filachuun, sanduuqa filannoo fi maddi ifaa haalaa galuumsaan qindaa'u.
Yoo makaa sanduuqa filannoo mallatteesite yookan mallatttessu baatte, gurmoo qabataman yookan gurmoo salphaan hin kennamu, gurmoo baratamaa uumta.
Gaadideessuu Mallatteessi mala giraawundii haala irrataatiif fayyadami, yoo ta'uu baate malli batteetu faayyada.
Mallii batteen halluu baaqqee fi balqeessisaa pooligoonii hindaaf qindeessa.
Malli giraawundii siimessa garagartoof fayyadama, baay'een qabatamaa fakkaata.
Daangaa wantaa Mallateessi qarqara irratti sarara kaasuuf.
Qarqara kolboo Mallateessi qarqara boca sanduuqa siimessuuf.
Qabduu saddeettan keessaa ifa kallattii banuu yookan cufuu irraatti biliqsuuf cuqaasi.
Durtiin maddi ifaa inni lammaffan ni biliqa. Innis tokkoffaa torban "normal" keessa madda ifaa walfakkaataniti.Maddi ifaa lakkofsa waajama tokkoo balqeessisuu ifaa shoola waliin ta'a.
Madda ifaa filameef, halluu filuu fi hamma saduuqa tarree keessatti qabduu saddetanii gadi ta'a. Gatiin balaqeessa'uu ifa hundaa ni ida'ama. Kanaafuu yoo ifa karaa baay'een dandeesiftu halluu dukkana'aa fayyadami.
Durargii xiqqaan sarjaa fi surdala qabannoo qindeessuuf madda ifa filamee fuula caancalee keessatti islaayiderii lama qaba.
Qabannoon xiyyoo durargii xiqqaa keessaa calaqqee gara keessaa halata mulullee fi kiyuubii gidduu agarsiisa.
Saduuqa taree ifa baramaa fayyadamii ifa baramaa qindeessuuf kan kallattii hundaan irraa haala walfakkatan ifa ibsu.
Title is: 3d Ilaala